ऋणबाट तनाबमा हुनुहुन्छ ? ऋणबाट पार पाउन यसो गर्नुहोस मिल्नेछ राहत… – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/ऋणबाट तनाबमा हुनुहुन्छ ? ऋणबाट पार पाउन यसो गर्नुहोस मिल्नेछ राहत…
अधिकांश मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋण लिने गर्दछन्। उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसके जीवनमा निकै तनाव खेप्नु पर्ने हुन्छ। ऋणको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन निकै कठिन हुन सक्छ। जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा ऋणको दोष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसक्दा निकै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ।